CCleaner Business Edition 3.17.1688 Final...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ CCleaner 3.17.1688 Business Edition လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!ကွန်ပြူတာကို မြန်စေတဲ့ Cleaner လေးတစ်ခုပါပဲ...!ကျွန်တော် Cleaner လေးတွေကို Update ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေမှာပါ...! သူငယ်ချင်းတို့စက်ထဲမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ Software တွေထဲမှာ Cleaner လေးတွေကလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်...!ဒါကြောင့် အသုံးလိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...!သိပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သီးခံပါလို့ပြေားပါရစေ...! Install မလုပ်ခင် Read Me ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖတ်ပြီးမှ လုပ်ပေးပါလို့ပြေားပါရစေ...!အသုံးလိုရင်တော့ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1 Response to CCleaner Business Edition 3.17.1688 Final...!
ကျွန်တော်လည်း cc cleaner လေး ယူသွားပါတယ်...